Hlola iSeville, Spain - World Tourism Portal
Hlola iSeville, Spain
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eSeville, eSpain.
Yini ongayenza eSeville, Spain
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseSeville
Bukela ividiyo ekhuluma ngoSeville
Hlola iSeville inhloko-dolobha yase-Andalucía kanye nesikhungo sezamasiko nezezimali eningizimu Spain. Idolobha elinabantu abangaphezulu kwe-700,000 (izigidi ezingama-1.6 endaweni yedolobha elikhulu, elenza idolobha elikhulu kakhulu le-4th Spain), i-Seville indawo ephezulu yase-Andalucía, nokuningi okunokunikeza isihambi.
Ekhulwini le-19th iSeville yathola idumela lokwakhiwa kwayo namasiko wayo futhi yayiyisitha eduze kweRomantic “Grand Tour” yaseYurophu
Isikhumulo sezindiza i-Sevilla International sitholakala cishe ngemizuzu engu-25 ngemoto kusuka enkabeni yedolobha.
I-Sevilla inohlelo olukhulu lokuhamba komphakathi. Amabhasi ahamba njalo futhi amboze iningi ledolobha emikhondweni yawo.
Amaholide kaZwelonke kanye neweSifunda
Usuku Lonyaka Omusha ngoJanuwari 1st
Izinsuku ezintathu zeNkosi uJanuwari 6th. Izingane zithola izipho ezivela kubazali bazo. Kukhona i-parade yamahora we-6 ezungeze idolobha.
Usuku lukaStephen uJanuwari 20th
Semana Santa (Isonto Elingcwele) Isonto eliqhubeka ngeSonto langePhasika. Ukuhlangana nokuntanta kugcwele kulo lonke idolobha.
Izinsuku ze-Feria de Sevilla 6 eziqala amaviki e-2 ngemuva kwe-Easter, ngo-2014 6 kuya ku-11 Meyi. Ubusuku bonke ukudansa kweFlamenco, izinkabi zezinkunzi, ukudansa ezitaladini kanye nokugibela amahhashi, umcimbi ogujwe kakhulu kuwo Spain.
Usuku Lwabasebenzi Meyi 1st
Usuku lukaJohane Juni 24th
I-Corpus Christi June 6th. Kuhlotshwe ngezigaba ezinkulu.
Marta Julayi 29th
Ukucatshangelwa kweNtombi kaMariya Agasti 15th
Zonke Usuku LwabaNovemba Novemba 1st. Izihlobo zibeka izimbali emakuva.
Usuku lukaKhisimusi ngo-December 25th
Usuku lwe-Stephens ngoDisemba 26th
Usuku Lomthethosisekelo ngoDisemba 6th
Dia de los Santos Inocentes Disemba 28th. Ifana ne-American April Fool's Day, izaba zokudlala ama-pranks angenacala kwenye.
Umqondo Ongaqondakali ka-December 8th
I-Seville iyikhaya lezingcweti eziningi ezinhle, ezinye ezaziwa kakhulu ngamapuleti namathayili aseSpain. I-Triana inikezela amafektri amaningi we-ceramic lapho umuntu angathenga khona amathayili ahlukahlukene kusuka kubasebenza ubuciko bangempela. Kukhona izitolo ezilinganisa amapuleti kanye namathayili eduze kwesonto, ikakhulukazi eCalle Sierpes, kepha ngaphesheya komfula eTransana kunezinye izitolo zobumba ezingabalulekile. Ngokuya ngesikhathi sonyaka, kepha ikakhulukazi okuholela kuKhisimusi, kunenqwaba yamacala obuciko kulo lonke idolobha.
I-Seville inikeza izinhlobo ezahlukene zezingubo zokuthengisa, noma ngokuvamile ngamanani aphezulu. Isifunda esikhulu sokuthenga siyikhaya layo yonke imigqa emikhulu yezingubo zomhlaba wonke neyaseSpain (njengeZara ene okungenani izitolo ezihlukene ze4 eSeville). Imigwaqo evunguzayo kanye nemigwaqo ehamba kahle yendawo yaseSanta Cruz (ezungeze iKathedral) yenza ukuhweba okubhodlayo eSpain- kanye nama-T-shirts ama-Andalusian-themed kanye nezingubo ezingabizi kakhulu zamantombazane amancane. ICorte Ingles (ehunyushwe ngokuthi “The English cut”) iyisitolo esikhulu sezitolo zomnyango ezitholakala kulo lonke elaseSpain zithengisa izingubo ngendlela yaseMelika.
I-Seville, njengezindawo eziningi ezihlala e-Andalusian, yaziwa ngama-tapas awo. I-"Tapa", ngenkathi ihlanganiswa nezitsha ezithile, empeleni ingusayizi kanti izindawo zokudlela eziningi noma imigoqo izonikela nge-tapa, i-1 / 2 ración (isigamu esikhonza, yize kwesinye isikhathi sanele ukwenza isidlo) no-ración (ekhonza) okufanayo indishi. Kunezindawo eziningi ezinkulu ze-tapas ezungeze unyawo lwesonto lesonto enkabeni yedolobha. Awungeke uhambe okungalungile, mane nje u-oda konke kwakho ukuthola okuthandayo! Amanye ama-tapas ajwayelekile afaka i-tortilla española (amazambane omelet), i-pulpo gallego (i-Gallic octopus), i-aceitunas (iminqumo), i-patatas bravas (amazambane abilayo), kanye ne-queso manchego (ushizi wobisi lwezimvu esifundeni esiseduze saseLa Mancha). Qiniseka futhi ukuthi uzama i-ham, ovame ukuyibona ilenga ngaphezulu kwebha. Yazi ukuthi iningi lekhishi lokudlela alikuvuli ngaphambi kwe-20: 30 kusihlwa. Yize kuvame ukuthi kube lula ukupheka ukudla ngaphambi kwalesosikhathi.
Uma udla imifino, qiniseka ukuthi ucacisa ukuthi awudli zinhlanzi noma i-tuna njengoba imifino kusho ukuthi akukho nyama lapha.
Uma ungathanda ukuthenga okwakho ukudla, ngehlela komunye wemakethe eseduze enkabeni yedolobha, njengasePlaza Encarnación. I-El Corte Inglés isitolo somnyango esithandwa kakhulu ongaya kuso cishe sonke isidingo.
UNGADli amawolintshi ezihlahleni ezisemgwaqweni uma uhambela isizini. Amuncu kakhulu futhi afafafazwe ukuvimba izinyoni ekudleni.
Kunemibhalo eminingana eseTestana ngaphesheya komfula enikela ngamathoyizi, ukuminyanisa kanye namakhekhe aphakathi asempumalanga endaweni ethokomele yemfucumfucu.
ISangría (isipikili sezithelo ezinotshwala) kwesinye isikhathi ifunwa yizivakashi, kepha iTinto de Verano (inhlanganisela yewayini elibomvu nosawoti kalamula noma owolintshi) iyiqiniso ngokwedlulele, inotshwala obuncane, futhi imvamisa ishibhile.
IC Cruzcampo, ubhiya wasendaweni, kufanele uzame. Uma kuqhathaniswa namanye amaSpain, amaSevillanos adla ubhiya obuningi newayini elincane.
Amanzi ompompi eSeville alungile.
I-Agua de Sevilla kwesinye isikhathi icatshangelwa njengesiphuzo esidumile eSeville, kepha awusoze wambona umuntu waseSeville eyiphuza, yize bonke abavakashi beyiphuza sengathi yinto edumile.
I-Seville idolobha elifanekisela i-Andalusia ogama laso liyaziwa emhlabeni wonke. Isiko, i-gastronomy, izakhiwo, isimo sezulu, ingqondo kanye nendlela yokuphila kuphupha bonke abahambi. Ungathola amakhona amaningi amahle, ukubukwa okungacatshangelwa kwedolobha noma izindawo ezihlukile ezivala izikhumbuzo zomlando ezinhle kakhulu. Kunezindawo eziningi ezinhle nezingalindelekile ezifinyeleleka zokuhlala isikhathi esifushane naphakathi.
Izindawo eziningi zinokupholisa umoya kodwa qiniseka ukuthi ubuza ehlobo, uzokufuna. Cishe uzodlula i -estest (ekuseni kakhulu) egumbini lakho ukuze ubalekele ukushisa.
Isiteshi samabhasi iPrado de San Sebastian sinikeza izindlela eziya kwamanye amadolobha ase-Andalucía, kufaka phakathi iCórdoba, iGranada, ne-Algeciras lapho kungenzeka ukuqhubeka ngesikebhe ukuya Morocco. Isiteshi sebhasi iPlaza de Armas sinikeza izindlela eziya kwezinye izingxenye ze Spain nakwamanye amazwe, ikakhulukazi iPortugal.
ISierra de Aracena. Itholakala eNyakatho Ntshonalanga yeSevilla, ingenye yezindawo ezidume kakhulu eJamón eSpain futhi igcwele amadolobhana amahle okuthola. Kuhle ukuhambahamba, ukudla nokuhlola le Natural Park.
ISierra Norte. Itholakala eNyakatho yeSevilla, yenza ushintsho oluhle kusuka esimweni esihle saseGuadalquivir Valley. Kuyindawo yokukhululeka emaweni, imifino yeminqumo, nezigodi ezijulile zemifula. I-Deer, izingulube zasendle nezinye izilwane ezinkulu kuvame ukubonwa emotweni. Le ndawo yaziwa kakhulu ngokudla kwayo okulaphekile.
Uhambo losuku oluhle kakhulu noma ukulenza izinsuku ezimbili ukubona konke. Vakashela eMezquita ngemidwebo enemiphetho emapheshana, ikota yabadala emhlophe ebiyelwe ngodonga lapho yonke indawo inikezela ngombono omusha, kanye nesiza seMedina Azahara sasemandulo. Ungathatha futhi ukugeza ku-Hamam, ukugeza ama-Arabhu, ukufakwa kwe-massage, okuhlangenwe nakho okuphumuzayo kakhulu.
Ukunikeza i-Alhambra engakholeki, kungenzeka kuhambo olude losuku, kepha kungcono ngempelasonto eyedlule noma ende.
Uhambo losuku oluhle kuleli dolobha elifudumele nelikhanyayo, ikhaya likaSherry amawayini, isizalo seFlamenco kanye nekhaya lamahhashi e-Andalusian / Carthusian (Ihhashi Elimsulwa laseSpain). Ihora elilodwa nje ngesitimela / ngebhasi ukusuka eSeville, okuncane kancane ngemoto. Vakashela amanye ama-cellular ewayinini ukuze wazi umlando wawo omude futhi ohlukile futhi uqhubekele emuva, vakashela i- “tabanco” edumile ukunambitha ama-tapas amnandi newayini eliyingqayizivele elizungezwe abantu bendawo. Ungajabulela futhi noma ufunde ezinye zeFlamenco (ungaphuthelwa Umkhosi weFlamenco ngoFebhuwari, iFeria del Caballo ngoMeyi imemezele i-International Tourism izivakashi noma umgubho wabo owaziwa ngoKhisimusi Zambomba kanye nezimpelasonto zikaDisemba) noma ukuhambela umcimbi othile wamahhashi eRoyal Andalusian School of I-Equestrian Art Foundation.
Idolobha elihle, lakudala (elidala kakhulu eYurophu njengoba besho). Isikhathi nehora nesitimela, okuncane kancane ngemoto. Hamba edolobheni lakhona, ugeze emabhishi alo futhi unambithe izinhlanzi zalo ezimnandi. Futhi uma yisikhathi seCarnival, ungaphuthelwa omunye wemikhosi emikhulu yeCarnival emhlabeni (futhi ngokuqinisekile ungomunye wemicimbi emnandi kakhulu).
Ukuthola idolobha laseBrithani leXX Century maphakathi naleli dolobha lase-Andalus kuyaphawuleka. IHuelva inomlando othakazelisayo. UColumbus usuka ePuerto de Palos naseLa rabida Monastery, lapho esebenze khona izinyanga ezimbalwa kufanelekile ukuvakasha. Amabhishi abanzi namhlophe azungeze, njengePunta Umbria noma i-Islantilla futhi yisizathu esihle sokuvakashela ukuzama izinhlanzi ezintsha. Amabhasi avela eDamaseku Inkampani Inkampani njalo ngehora ukusuka ePlaza de Armas Bus Station.
Ehlobo, kutholakala izikebhe ezivela ngaphansi kweTorre de Oro ziye eSanlucar de Barrameda ngasemfuleni.
Ohambweni olude, Madrid amahora angama-2.5 kusuka eSeville.